akwụkwọ igbe katọn etiti isi sịntetik eriri ikuku nyo
Ihe nzacha ahụ na-eji eriri eriri sịntetik na eriri iko eme ihe dị ka ihe nzacha, mgbe ọ na-apịkọ, ọ nwere arụmọrụ arụmọrụ dị elu, ikike uzuzu dị elu, nguzogide dị ala na atụmatụ ndị ọzọ. Ọtụtụ-eji na ọhụrụ ikuku tinyekwa 's ikuku ọcha nke n'ozuzu ntụ oyi usoro, ikuku ọcha usoro na ịgba ọhụrụ ikuku ọkọnọ usoro, ọ nwekwara ike-eji dị ka a tupu nyo nke ọkara arụmọrụ nyo ịgbatị ya ọrụ ndụ. N'ozuzu ya ọnọdụ okpomọkụ eji eme ihe erughị ogo 93.
nke nwere ike ịgbanwe aluminom na-edobe ikuku tupu ikuku
Ihe nzacha ahụ na-eji eriri polyester synthetic synthetic dị ka ihe nzacha, mgbe ọ kpụchara, ọ nwere arụmọrụ dị elu, nnukwu ájá na-ejide ikike, na nkwụsi ike dị ala na nza edochi, ụgwọ ọrụ na atụmatụ ndị ọzọ.
na-abụghị nkebi tank ụdị elu arụmọrụ iyo
l enweghị mpepu mmiri ọ bụla nwere ike ịwụnye n'ihi iji ihe pụrụ iche dị ka akara akara.
partiton pleat elu arụmọrụ ikike HEPA iyo maka ngwá electronic dị ọcha ụlọ ọgwụ nkiri
Ihe nzacha ahụ na-eji akwụkwọ fiber glass dị ezigbo mma dị ka akụrụngwa, na dechapụ akwụkwọ dị ka bọọdụ nkebi, na-eji igbe galvanized, alloy aluminum, na gluu. Ngwaahịa a nwere atụmatụ nke nnukwu filtration arụmọrụ, ala na-eguzogide, nnukwu ájá na-ejide ikike na echekwa ego. Ọ na ọtụtụ-eji na njedebe 's ikuku ọcha nke izugbe ntụ oyi usoro, ikuku ọcha usoro na ịgba ọhụrụ ikuku ọkọnọ usoro. N'ozuzu, ọnọdụ ihu igwe dị ihe na-erughị ogo 60. Ihe akpara ókè bụ igbe galvanized na igbe aluminom.
V- ekara elu arụmọrụ iyo
V ekara imewe na ihe ndị kasị Obere pleat iyo, nwere ọzọ iyo ebe karịa omenala iyo. Large nyo ebe nwere ike ijikwa ibu ikuku olu, ịnọgide na-enwe ala mgbali ọnwụ na ịgbatị ọrụ ndụ nke iyo. Myọcha ihe: nyo ihe adopts superfine iko eriri nke na-agbakọta n'ime etiti site pleating.The nyo akwụkwọ na-iche site na-ekpo ọkụ gbazee nrapado, na ọ na ọtụtụ-eji ikuku-conditioners na ndị ọzọ na ubi nwere iwu chọrọ na ikuku.
arụmọrụ dị elu dị elu yana nkebi enweghị oghere ikuku
A na-ejikarị ya na ikuku ikuku na njedebe nke osisi dị ọcha, dị ka: ọgwụ, ọgwụ, nri, kọmputa, nkenke mkpuchi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ngwaahịa na-eji mkpakọ igwe, na ihe igbe bụ GB oyi akpọrepu.
Box elu ọgwụgwọ adopts phosphating ịgba, na ike corrosion eguzogide.
FL usoro elu okpomọkụ ikuku nyo eji ultrafine iko eriri dị ka nyo akwụkwọ, aluminum foil dị ka separator, na igwe anaghị agba nchara dị ka etiti. Ọ na-anọkwasị na-onwem na dị dị elu okpomọkụ roba. Onye nza ọ bụla agafeela ule siri ike na arụmọrụ nzacha dị elu, nguzogide dị ala, nnukwu uzuzu na-ejide ikike, na nguzogide okpomọkụ dị elu. Ọ bụ n'ihi na elu-okpomọkụ ikuku ọcha equipments na usoro na-achọ elu mkpuchi mmepụta edoghi dị ka ihicha